Steve Jobs | rafozan-doza |
Efa fantam-poko fantam-pirenena moa fa hoe lasa omaly i steve jobs, mpamorina ny orinasa paoma. Efa betsaka ny hoe tribute sy hoe fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra bedabe eraky ny aterineto ho anazy. Tena olo-manga tokoa ny lehilahy. Za moa tsy manana hoe vokatra paoma na iray aza (hitako lafo be @ tsinapa le izy), izany hoe tsy dia fanclub be otran'ny hoe ankamaroan'ny be sy ny maro, fa na izany aza mba mijery izay voasoratra momba azy. Otran'ny hoe Michael Jackson ihany ee. Tsy te ho tavela ivelan'ny resaka enao refa mifankahita @ namana hoe tena lasa i lery dia mba mahita ho tenenina...
Akory ary ny hagagako nahita an'ity kabarin'lery ity tao @ Stanford. Otran'ny hoe nanana talenta hoe "motivational speaker" koa lery an. Lava be le izy fa samia mamaky ze liana (azo adika @ GooGle ra ohatra ka...) fa ireto ny isan'ny mba nanohina kely ah hoe... tena marina tokoa.
Voalohany ary dia ny hoe:
Hoe, tsy ho hitanao mihintsy ny fifandraisan'ny lalana nizoranao eo @ fiainana raha tsy efa any aoriana any. Hoe ra tsy nisy an'izao mety tsy ho izao ny fiainako. Noho izany dia manana finoana @ zavatra ataonao fa indray andro any hitondra zava-tsoa eny fa na dia tsy mazava aza @ izao fotoana izao.
Indraindray mety mitoraka briky eo @ lohanao ny fiainana. Aza kivy. Inoako marimarina fa ny hany zavatra tsy nampijanona ahy teo @ asako dia noho izaho tena tia ny zavatra nataoko. Mila mitady ny zavatra tiana eo @ fiainana, na eo @ asa io na eo fiainana aram-pitiavana. Ny asanao no hameno ny ankabeazan'ny fiainanao. Ny hany lalana hampasambatra/faly anao dia ny finoana fa ny zavatra ataonao dia asa manezinezina, tsara tsy misy toy izany. Ary hany hahafahanao manao asa manezinezina dia ny fitiavana ilay asanao. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao ilay tinao hatao dia aza mora mionona. Mitadiava. Toy ny zavatra hidiran'ny fo rehetra, ho fantatrao eo ihany rehefa hitanao ilay tena izy. Ary toy ny fifankatiavana rehetra dia mitombo sy mihatsara araka ny mahaela azy. Noho izany, aza mionona fa tadiavo foana mandra-pahitanao azy.
Ny fahalalako fa ho faty tsy ho ela aho no zavatra nanampy ahy be indrindra t@ fandraisako fanampahankevitra lehibe eo @ fiainako. Satria, ny zavatra hatahorana toy ny hoe hambo-po, fahafaham-baraka, fanatenan'ny olona amiko, faharesena, ireny rehetra ireny dia zava-poana ary kely dia kely mihoatra @ fahafatesana. Tsy misy zavatra ambony noho ny miaina. Ny fahafantarana sy fahatsiahivana fa ho faty ianao no hery lehibe indrindra hampatsiaro anao fa tsy misy zavatra hafa ratsy kokoa noho izany mety hitranga aminao ka anjaranao ny mandray an-tanana ny hoe hanaraka izay tinao, izay tondroin'ny fonao hatao.
Voafetra ny fotoana ananao koa aza mandany andro miaina ny fiainan'ny hafa. Aza manaiky ho voafingan'ny dogma, izany hoe miaina @ vokatry ny hoe fieritreretan'ny hafa ny hoe tokony ho fomba fiainana. Aza manaiky ho totofan'ny hafa @ feony sy ny heviny ny feonao sy hevitrao. Ary ny tena ambony indrindra dia ny heo manana korazy sy ambom-po hanaraka ny ao amponao sy ny tsindrimandry ananao. Ireo no mahafantatra ny tena mety ho anjara sy lahatra ho anao. Ny ambiny manaraka ho azy.
olon'ny fo izy ary fatany izay ataony.
Posted by simplex at 19:48 Hametraka hevitra (0) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Diary